Audi AG ရဲ့ ၁၉ ရာစုအတိတ်ကာလကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်......
နှစ် ၁၀၀ အထက်သက်တမ်းရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာ ကြီးကျယ်တဲ့ ပင်ကိုယ်လက္ခဏာတွေများစွာကို ရှာတွေ့ကြမှာပါ။ မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ မော်တာပြိုင်ပွဲ စတဲ့နယ်ပယ်တွေရဲ့ အဓိကကျတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်များစွာစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ Audi ရဲ့ ကား မော်ဒယ်များစွာတီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းတွေနဲ့အတူ စွဲမက်ဖွယ်ရာဆင့်ကဲတိုးတက်လာမှုကို တွေ့ကြရမှာပါ။
Audi ဆိုတဲ့သမိုင်းစာအုပ်ကြီးရဲ့ ပထမဆုံးအခန်းကို ၁၈၉၉ မှာ August Horch ကစတင်ရေးသားခဲ့တယ်။ Horch & Cie. ဆိုတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်ခဲ့ခြင်းနဲ့ပေါ့။ နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်အကြာမှာတော့ Horch ကပဲ နောက်ထပ်ကားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ပြန်တယ်။ အမည်က Audi Automobilwerke in Zwickau ပါ။
AUDI AG ရဲ့ အတိတ်ကတော့ ၁၉ ရာစု ကားနဲ့အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်အတွင်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ ဂျာမနီက တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ ဦးဆောင်မော်တော်ယာဉ် အင်ဂျင်နီယာတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်သူ August Horch ကနေ စတင်ခဲ့တာပါ။ ဂျာမနီအရှေ့ပိုင်း Saxony ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Mittweida မြို့ Technical Academy ကနေ ကျောင်းပြီးကာစ Horch ဟာ Mannheim မြို့မှာရှိတဲ့ Carl Benz ကုမ္ပဏီရဲ့ အင်ဂျင်တည်ဆောက်မှုဌာနမှာ အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ခဲ့တာ ဌာနရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အထိပါပဲ။ ၁၈၉၉ မှာတော့ Horch ဟာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါပြီ။ Cologne မြို့မှာ Horch & Cie. ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပေါ့။ ၁၉၀၂ မှာတော့ Saxony ကိုပြန်ပြောင်းလာခဲ့ပြီး Reichenbach မှာ အခြေချခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၀၄ မှာတော့ Zwickau မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီကိုလည်း joint-stock corporation ပုံစံပြောင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။
Horch မှသည် Audi
၁၉၀၉ မှာတော့ Horch & Cie. ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်း ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေအကြား သဘောထားကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ August Horch ဟာ ကုမ္ပဏီကနေထွက်သွားခဲ့ပြီး ချက်ခြင်းဆိုသလိုပဲ နောက်ထပ် ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုကို Zwickau မှာ တည်ထောင်ပြန်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီအတွက်တော့ သူ့ရဲ့ မိသားစုအမည်ကို ထပ်သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီအမည်ဟာ သူ့ရဲ့ ပထမကုမ္ပဏီအတွက် အသုံးပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင် Trademark နဲ့ကာကွယ်ထားလို့ပါ။ ဒါနဲ့ပဲ Horch ဟာ ကုမ္ပဏီအသစ်ကို သူ့ရဲ့အမည်ကိုပဲ လက်တင်ဘာသာပြောင်းပြီး အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “horch!” ဒါမှမဟုတ် “hark” ကနေပြီး “audi!” ဆိုပြီးဖြစ်လာတာပါ။ ကုမ္ပဏီအသစ် နာမည်ပေးရာမှာ လက်တင်ဘာသာကိုအသုံးပြုခဲ့ရခြင်းကတော့ Horch ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သူရဲ့ သားတစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကောင်လေးကတော့ လက်တင်ဘာသာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီအသစ်အတွက် နာမည်ပေးဖို့ Horch တို့ တိုင်ပင်နေတဲ့အချိန်မှာ အကြံပြုခဲ့တာပါ။ အဲဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့ August Horch ဟာ သူ့ရဲ့လက်မှတ်ကို “Kind regards - Audi-Horch” ဆိုပြီးပဲ နောက်ပိုင်းမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတော့တယ်။ Audi Automobilwerke GmbH ကုမ္ပဏီကတော့ ၁၉၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ joint-stock ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကွင်းလေးကွင်း - အမှတ်တံဆိပ်လေးခု
Audi ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ ကွင်းဆက်လေးခု အမှတ်အသားဟာ ဂျာမနီက Saxony ပြည်နယ်အခြေစိုက် Audi ၊ DKW ၊ Horch နဲ့ Wanderer ဆိုတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီလေးခု ပေါင်းစည်းပြီး Auto Union AG ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့ အမှတ်အသားပါ။ အဲဒီအချိန်က ဂျာမနီရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖေါ်ပြမှာကတော့ ကနေ့ AUDI AG ရဲ့ ဖြစ်တည်လာပုံ ဇစ်မြစ်ကိုပါ။
ကုမ္ပဏီကို August Horch က Zwickau မြို့မှာ ၁၉၀၉ ဂျူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ စတင်တည်ထောင်ချိန်က ပြိုင်ဆိုင်မှု အကြောင်းပြချက်ကြောင့် တည်ထောင်သူရဲ့နာမည်ကို ပေးခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ အပေါ်မှာတင်ပြခဲ့သလိုပါပဲ၊ Audi ဆိုတဲ့အမည်ဟာ Horch ကို လက်တင်လို ဘာသာပြန်ပြီး ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ August Horch တည်ထောင်လိုက်တဲ့ ဒုတိယကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်း ၁၉၁၀ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ Audi Automobilwerke GmbH ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာကတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံ Sexony ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Chemnitz မြို့မှာပါ။ ၁၉၀၂ က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စစခြင်းအမည်ကတော့ Rasmussen & Ernst ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ၁၉၀၇ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ Erzgebirge ဒေသမှာရှိတဲ့ Zschopau ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ တည်ထောင်ကာစကတော့ ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်သုံးစက်တွေအတွက် exhaust-stream oil separators ၊ မော်တော်ယာဉ် ရွှံကာနဲ့ မီး၊ မော်တော်ယာဉ်သုံး ပိုမိုပျော့ပျောင်းခိုင်ခံ့အောင် ကန့်နဲ့ပေါင်းတင်ထားတဲ့ ရော်ဘာပစ္စည်း စတာတွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ကုမ္ပဏီရဲ့ တည်ထောင်သူ Jörgen Skafte Rasmussen ဟာ ၁၉၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်သုံး မော်တော်ယာဉ်ကို သုတေသန စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှာတော့ trademark ကို DKW (Dampfkraftwagen ရေနွေးငွေ့ဖြင့်မောင်းနှင်သော မော်တော်ယာဉ်၏ အတိုကောက်) အဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၁၉ အရောက်မှာတော့ ကုမ္ပဏီဟာ2stroke အင်ဂျင်တွေကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၂၁ မှာတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ နာမည်ကို “Zschopauer Motorenwerke J.S. Rasmussen OHG” ဆိုပြီးပြောင်းခဲ့ကြပြီး DKW အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ Zschopau စက်ရုံကနေပြီး ပထမဆုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် ထွက်ရှိလာပါတော့တယ်။
၁၉ ရာစုအကုန်မှာတော့ ဂျာမနီမှာ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးတွေ အများကြီးရှိနေခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီထဲက တစ်ခုကတော့ ၁၈၉၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က Cologne မြို့မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ August Horch & Cie. ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ August Horch ဟာ မော်တော်ယာဉ် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ် ခေတ်ရှေ့ပြေးသူ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပါ။ Horch ဟာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း မထူထောင်မီ Mannheim မြို့က Carl Benz မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အင်ဂျင်နီယာခေါင်းဆောင်အဖြစ် သုံးနှစ် သက်တမ်းအပါအဝင် လုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ ၁၉၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ Horch ဟာ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကို Zwickau ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုလည်း joint-stock အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
၁၈၈၅ ခုနှစ်အတွင်း စက်ပြင်ဆရာနှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ Johann Baptist Winklhofer နဲ့ Richard Adolf Jaenicke တို့ဟာ Chemnitz မြို့မှာ စက်ဘီးပြင်ဆိုင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူတို့ဘာသာသူတို့ စက်ဘီးတွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်က တော်တော်ကြီးကို တောင်းဆိုမှုများပြားတဲ့ စက်ဘီးတွေထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီထုတ်ကုန်တွေဟာ Wanderer ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အောက်ကနေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၁၈၉၆ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ Wanderer Fahrradwerke AG အဖြစ်နဲ့ အများပိုင်ကုမ္ပဏီပြောင်းလဲခဲ့ကြပါတယ်။ (AG ဆိုတာ Aktiengesellschaft ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကတော့ public limited company ဖြစ်ပါတယ်)။ Wanderer ဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ၁၉၀၂ မှာ စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေမှ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးကို တိုးချဲ့မယ့်အကြံအစည်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှာမှ လက်တွေ့ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။
၁၉၃၂ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာတော့ Audiwerke ၊ Horchwerke and Zschopauer Motorenwerke J.S. Rasmussen AG (DKW) တို့ဟာ Saxony ပြည်နယ်ဘဏ်ကနေတစ်ဆင့် Auto Union AG အဖြစ်သို့ ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Wanderer ကုမ္ပဏီကို Auto Union AG မှဝယ်ယူလိုက်ကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအသစ်ရဲ့ ရုံးချုပ်တွေကိုတော့ Chemnitz မြို့မှာပဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးကြတဲ့နောက်မှာတော့ Auto Union AG ဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစုကြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတကိုတော့ ကုမ္ပဏီကြီးလေးခုပေါင်းစည်းခြင်းအဖြစ် ကွင်းလေးကွင်းဆက် သင်္ကေတကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ် Audi သင်္ကေတနဲ့အတူ ကုမ္ပဏီရဲ့အထင်ကရသမိုင်းကြောင်းပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာက Audi ၊ DKW ၊ Horch နဲ့ Wanderer အမှတ်တံဆိပ်တွေဟာ ပူးပေါင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပျောက်ပျက်သွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဈေးကွက်နဲ့သူ ကျန်ရှိနေလျက်ပါ။ DKW ဆိုရင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကားအသေးတွေ၊ Wanderer ဆိုရင် midsize ကားတွေ၊ Audi ဆိုရင် အလယ်အလတ်အရွယ်အစား ဇိမ်ခံကားတွေ၊ Horch ဆိုရင် ဈေးကွက်အတွင်း ထိပ်ဆုံးနေရာကိုယူမယ့် ဇိမ်ခံကားတွေ အစရှိသည်ဖြင့် သူ့အပိုင်းနဲ့သူ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
"ကနေ့မှာတော့ Audi အမှတ်တံဆိပ်ဟာ Volkswagen Group ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။"
Ref: Cornerstone by Audi